Quraafiistihii qadartu saaciday. – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Waxa uu mudo kooban kadib go’aan saday inuu uso hayaamo nimcada qaarada cad (YURUB). Safarkiisa waxa ku wehliya gabadh yar oo uu dhalay, se ay hooyadeed duruufaha iyo dalanbaabi-ga dunidu kala maasheeyeen. Tab walba uu dantiisa ku gaarayo ayuu qaaday. Waakan soo dagay qaradii uu inbadan nafta ku qancin jiray “Mar un baad tagaysaa”, se xaalku siduu moodayay muu noqon.
Qaribanaa oo qabow badanaa!, qaleel maleh oo waa qoyaan joogta ah, jawi cakiran iyo jahwareeer baa u bilaabmay. Wakaa oo da,dii lixdameeyaduu gundaha sii haystaa, oo xoog uu ku xamaal tago kuma harin. Talo allow hanoo waayin. Waa basharee, tub markay iska oodaba tub kalaa loo bidhaamiya. Caawaba waakan fikir iyo isla hadal bilaabay. Oo muxuu ka fakari ma shaqo mise.. mise..? Moooyi bal aan dhuganno.
Wuxuu marba baal rogaba waayaha aduun, waxa usoo baxay talo iyo tubtii uu ku shaqa tagi lahaa. Aheey ah, Isku sheegi lahaydaa markuu dalkii joogay, se kaba sii fiiican hadaba, oo maanta waxa gacanta ugu jira, warqad uu dunida dacaladeeda ku dawaafi karo, balse caqabada ugu wayn ee hortagan aya ah, gabadhii uu rajada ka dhigay siduu nolosheeda u marayn lahaa, xagee buu uga tagaa? Ma dhulkan uu isaguba ku caarooday? Ma qof cad buu gacanta ugaliya? Si walba ha ahaate; waxa usoo baxday iyadiina tub kale oo uu ku mareeyo, wakaa gacanta u galiyay islaan ay haybta sare wadaagan.
Hada waxa uu, u tabaa-bushaysanayaa, siidii uu u hirgalin lahaa fikirkii ay xalay maskaxdiisa qalinka ku duugtay, ku dhaqaa-qidiisa. Allow alle! xagee wax laga bilaaba? Waa giraan duubanoo daraf la qabtaa lahayn, waxa usoo baxay inuu fikirkiisa si walbay tahayba dib usan uga laba-labayn. Wa nin waayuhu ciilay, se aqoon yar diinta u leh, oo fikirka iyo shaqada uu gundaha ulaabtay, waa sidii uu faa,ido uga heli lahaa intii yarayd ee uu diinta ka bartay ee bilaa fasirka ahayd .
Waxay giraantu wareeegto, waayhu marba cimilo yeesho, maalmuhana is daba ordaan, sanooyinku sanka is galiyaan . Mido 3 sano ah ayaa kasoo wareegtay habeenkii uu qolka lambada yar ee sariirta nafarka ah taalay, gabdhiisuna dacalka shishe jiiftay uu go,aansaday sidii uu u taaba galin lahaa, xarun qur,aan o dadka lagu dabiibo…
Maanta wax walbaa way isugu hagaageen, oo waakan boorsadiisa siinyerka u xirtay, gacantana ku wata tikid-kii uu ku duuli lahaa.
Aduunoow xaal qaado!, wadankii uu shalay ku gaajaysnaa, waakan caawa fadhiya Airport-kiisa,waliba qaybta kala badalashada diyaaradaha . Waxa uu sugayaa dayuuradii ula duuli lahayd dalkii uu socday, waakan wadaadkii oo cayilay, garkii uu gu,yaal ka hor hiifi jiray waa kan maanta uu gundaha u marayo ” allow gar hanoo waayin”.
Waxba yaan hadal idinku daaline, maanta waxa si diiran loogusoo dhaweeyay, gagida diyaaradaha ee allay-baday international Airport, isaga iyo boorso yar oo ay qadaadiici ugu jirto, “lagactu, waa lacag uu kasoo amaahday qolyo ay isku isir yihiin markii uu, udan sheegtay , una soo bandhigay hab-ka uu wax urabo “.
Lix bilood kadib magaciisii waxa uu ka horaysiiyay ” al sheeekh ” waakan ay maanta hoos fadhiyaan umad dhan oo aamintay qurafaad, iyo qowmam aan lagaranayn oo dulaan ku ah nafahooda. Alsheekh Cumaama, maanta waa sheekha magaladeena, waana dhakhtarka kali ah ee biyo winyeerah (cad) wax ku daaweeya, waxaa inta u dheer; waa nin koobsaday cilmiyo badan sida; cilmiga jinka, cilmiga isha, cilmiga indhaha , iyo kkb. Intaas oo xanuun dawada uu, u isticmaalo ee muqataa wa mid qura, waana biyo cad oo sida beerta la isugu rusheeyo iyo kalmad aan garan waayay mesha uu ka keenay oo ah sixir,sixir sixir sixir . Maanta waxa ku xiran bulsho ka badan malaayin, oo degaanka iyo dslalka nagu hareeraysan dagan, mehradiisuna wataa calan walaynaysa.
Qormadan gaaban waxaan uga danleeyahay, ujeedkeduna yahay sida umadu u aaminto quraafiiste walbaa oo usoo qaraab taga. Waxa kali ah ee bulsho aayahoda seejisa waa aqoon dari, taaso ka timaada dhan walba haday diin, maadi iyo mid nafeedba ahaan lahayd . Qormadan waxaan uga gol leeyahay bulshadeenu waa inay iska hubisaa qof walba oo usoo shaqa taga, dibna u milicsataa wayihiisa nololeed iyo heerka uu ka taagan yahay waxa uu rabo inuu bulshada la wadaago .